Mareykanka oo War kasoo saaray Duqeynn Culus uu ka fuliyay Degmada… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo War kasoo saaray Duqeynn Culus uu ka fuliyay Degmada…
Ardaan Yare 20 January 2021
Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa ka hadlay duqeyn diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen agagaarka degmada Jammaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Qoraal kasoo baxay Taliska Ciidamada AFRICOM ayaa lagu sheegay in dqueynta oo ka dhacday degmada Jammaame lala bartilmaameedsaday xubno ka tirsan Al-shabaab oo xiligii uu weeraru ka dhacaayay ku sugnaa halkaas.
AFRICOM ayaa sheegtay in duqeynta diyaaradeed lagu dilay saddex xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, isla markaana lala beegsaday weerarka, in kasoo aysan magacyadooda shaacin Mareykanka xubnaha la dilay.
Sidoo kale Taliska Ciidamada AFRICOM ayaa xusay in weerarka wax khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uusan kasoo gaarin dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhawaa, kadib baaritaano ay saameyeen, waa sida hadalka loo dhigay.
Dhinaca kale Al-shabaab ayaa goorsii horeysay oo shalay ka hadashay duqeynta diyaaradaha Mareykanka ee Drones-ka ka geysteen degmada Jammaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda qadka ayey ku sheegeen in duqeynta lagu dilay Suldaankii mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega deegaanada Jubbooyinka, iyagoona magaciisa ku sheegay Suldaan Maxamed Cabaas.
Madaxweyne Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay Madaxweynihii hore ee dalka
Wasiir ku geeriyooday saakay Somaliland iyo MW Deni oo War soo saaray